कारणहरू र जलवायु परिवर्तन को नतिजा
हाम्रो ग्रह को भूवैज्ञानिक उमेर बारेमा 4.5 अरब वर्ष पुरानो छ। यो समयमा, पृथ्वी नाटकीय परिवर्तन भएको छ। वातावरण को संरचना, ग्रह को ठूलो, को जलवायु - सबै को अस्तित्व को सुरुमा पूर्ण फरक थियो। पिघला बल बिस्तारै हामी आज देखेर प्रयोग गरिन्छ बाटो बन्ने। नयाँ पहाड दायरा गठन अनुभव tectonic प्लेट। बिस्तारै तल ठंडा मा ग्रह को समुद्र र समुद्रहरू गठन। तिनीहरूले देखा पर्नुभयो र आफ्नो आकार र आकार परिवर्तन, महादेशमा गायब। पृथ्वी बिस्तारै कताई। त्यहाँ पहिलो बिरुवाहरु र त्यसपछि नै जीवन थियो। तदनुसार, यो ग्रह मा वर्ष को पछिल्लो अरबौं भन्दा त्यहाँ hydrologic चक्र, गर्मी विनिमय र वायुमण्डलीय संरचना मा नाटकीय परिवर्तन गरिएको छ। जलवायु परिवर्तन पृथ्वी अस्तित्व माथि सबै निरन्तर छ।
Holocene - को Quaternary अवधि को भाग को Cenozoic युग को। अर्को शब्दमा, यो बारेमा 12,000 वर्ष पहिले थाले र वर्तमान जारी कि युग हो। Holocene बरफ उमेर को अन्त संग थाले, र ग्रह मा जलवायु परिवर्तन देखि ग्लोबल वार्मिंग तिर गए। यो युग अक्सर त्यहाँ धेरै बरफ उमेर थिए ग्रह को सबै climatic इतिहास लागि रूपमा, interglacial भनिन्छ।
पछिल्लो वैश्विक ठंडा लगभग 110,000 वर्ष पहिले भयो। बारेमा 14 हजार वर्ष पहिले यो बिस्तारै वार्मिंग थाले सम्पूर्ण ग्रह फसेको। समय उत्तरी गोलार्द्धको को बढीमा ढाकिएको कि ग्लेसियर ढल्छ र बिखर गर्न थाले। स्वाभाविक, यो एक पटक सबै हुँदैन। ग्रह हल्लाइन्छ बलियो तापमान उतार चढाव को एक धेरै लामो अवधि लागि, अग्रिम ग्लेसियर, त्यसपछि फेरि retreated। यो सबै समुद्रहरू को स्तर असर गर्छ।
धेरै अध्ययन समयमा, वैज्ञानिकहरू, जलवायु आधारमा धेरै समय अवधि मा Holocene विभाजन गर्ने निर्णय गरेको छ। लगभग 12-10 हजार वर्ष पहिले, हामी बरफ टोपी, गए पोस्ट-हिमनदीय आउनुहोस्। युरोप मा, टुन्ड्रा यो सन्टी, पाइन र taiga वन बदलिएको थियो, गायब गर्न थाले। यो समय आर्कटिक र उप-आर्कटिक अवधि भनिन्छ।
यो boreal को युग पछि थियो। Taiga टुन्ड्रा उत्तरतिरका टाढा धक्का छ। दक्षिणी युरोप मा, त्यहाँ व्यापक-leaved वन थिए। त्यो समय मा, जलवायु ज्यादातर सुन्दर र सुक्खा थियो।
लगभग 6000 वर्ष पहिले एटलांटिक युग, जुन बेलामा हावा न्यानो र आर्द्र, आधुनिक भन्दा धेरै न्यानो थियो। यो समय अवधिको climatic अधिकतम Holocene हुन मानिन्छ। आइसल्याण्ड को आधा सन्टी वन ढाकिएको थियो। युरोप गर्मी-मायालु बोट को एक विस्तृत विविधता भरिएको छ। एकै समयमा तापक्रम वनको लम्बाइ धेरै अगाडी उत्तरी थियो। को Barents सागर को किनारा मा शंकुधारी वन, taiga र पुग्यो केप Chelyuskin बढ्न। आधुनिक सहारा को साइट मा Savannah थियो, र पोखरी चाड पानी को स्तर वर्तमान 40 मीटर माथि थियो।
त्यसपछि फेरि जलवायु परिवर्तन आयो। त्यहाँ बारेमा 2000 वर्ष लामो एक चिसो हिज्जे थियो। यो समय अवधि subboreal भनिन्छ। अलास्का, आइसल्याण्ड, आल्प्स मा पहाड दायरा ग्लेसियर मिल्यो। परिदृश्य क्षेत्र नजिक भएको भूमध्यरेखा गर्न सारे छ।
Subatlantic - लगभग 2.5 हजार वर्ष पहिले आधुनिक Holocene अन्तिम अवधि थाले। यो युग को जलवायु कूलर र wetter भयो। पीट bogs देखा पर्न थाले, टुन्ड्रा बिस्तारै जंगल मा बसोबास गर्न थाले र वन - को steppe मा। 14 औं शताब्दीमा वरिपरि जलवायु मध्य-19 औं सताब्दी सम्म लामो जो साना बरफ उमेर, गर्न प्रमुख, ठंडा। यस समयमा, हामी उत्तरी युरोप, आइसल्याण्ड, अलास्का र Andes को पहाड दायराहरूमा ग्लेसियर को आक्रमण रेकर्ड भयो। संसारको जलवायु विभिन्न भागमा synchronously परिवर्तन। को साना बरफ उमेर को शुरू भएको कारण अझै पनि अज्ञात छन्। अनुमानको वैज्ञानिकहरू अन्तर्गत जलवायु कारण बढ्छ गर्न eruptions भिन्न र वातावरणमा कार्बन डाइअक्साइड एकाग्रता कम गर्न सक्छ।
मौसम अवलोकन को शुरुवात
पहिलो मौसम विज्ञान स्टेशन देर 18 औं शताब्दीमा देखा पर्नुभयो। त्यो समय देखि अहिले जलवायु भेरिएसनहरूमा को लगातार निगरानी अन्तर्गत। यो credibly को साना बरफ उमेर पछि थाले, र वार्मिंग वर्तमान जारी कि दावी गर्न सक्नुहुन्छ।
19 औं शताब्दीको अन्त देखि, ग्रह को वैश्विक औसत तापमान मिलाएका छौं। मध्य-20 औं शताब्दीमा, त्यहाँ एक सम्पूर्ण रूपमा जलवायु कुनै प्रभाव थियो जो एक मामूली चिसो, थियो। मध्य-70s फेरि न्यानो भयो भएकोले। वैज्ञानिकहरूले पछिल्लो शताब्दीमा भन्दा पृथ्वीको 0.74 डिग्री वैश्विक तापमान वृद्धि भएको छ कि अनुमान। यो सूचक को उच्चतम विकास अन्तिम 30 वर्ष मा रेकर्ड भएको थियो।
जलवायु परिवर्तन सीधा समुद्रहरू को राज्य असर गर्छ। विश्व तापमान वृद्धि यसको स्तर वृद्धि गर्न पानी को विस्तार गर्न जान्छ, र यसरी। पनि वर्षा ढाँचाहरू, जो बारी मा नदी र ग्लेसियर को प्रवाह प्रभावित गर्न सक्छन् परिवर्तन आउँदै।
को अवलोकन अनुसार, पछिल्लो 100 वर्ष को लागि समुद्रहरू को स्तर5सेमी द्वारा हुर्किसकेका छ। यस जलवायु वैज्ञानिकहरूले को वार्मिंग कार्बन डाइअक्साइड एकाग्रता को वृद्धि र ग्रीनहाउस प्रभाव मा एक महत्वपूर्ण वृद्धि गर्न थप्नुभएको छ।
वैज्ञानिकहरूले धेरै पुरातात्विक अध्ययन सञ्चालन र ग्रह गरेको जलवायु बस आमूल परिवर्तन छैन भनेर निष्कर्षमा छन्। धेरै hypotheses यस सन्दर्भमा अगाडि राख्नु भएको छ। एक राय अनुसार, पृथ्वी र सूर्य को बीच दूरी नै, साथै परिक्रमणहुनेकिसिमकोगती र ग्रह एक्सल को कोण रूपमा रहनेछ भने, जलवायु स्थिर रहनेछ।
जलवायु परिवर्तन बाह्य कारक:
सौर विकिरण परिवर्तन सौर विकिरण fluxes को परिवर्तन गर्न जान्छ।
tectonic प्लेट को आन्दोलन देशमा orography, साथै सागर र यसको परिसंचरण को स्तर असर गर्छ।
वातावरण को ग्याँस संरचना, विशेष मिथेन र कार्बन डाइअक्साइड एकाग्रता मा।
परिक्रमण अक्ष झुकाव परिवर्तन।
सूर्य को सम्बन्ध मा ग्रह को कक्षा को मापदण्डहरु परिवर्तन।
पार्थिव र कस्मिक catastrophes।
मानव गतिविधि र जलवायु यसको प्रभाव
जलवायु परिवर्तनको कारण यसको अस्तित्व, भर मानिसजातिको प्रकृति हस्तक्षेप गर्न भन्ने तथ्यलाई सहित लिङ्क छन्। वन फँडानी पाराले जोतेर भूमि reclamation र एम। पी रूपानान्तरण चिस्यान र हावा अवस्था नेतृत्व।
जब मानिसहरू प्राकृतिक वातावरणमा परिवर्तन, खर्च नगरेर swamps कृत्रिम ponds सिर्जना गर्ने, वन तल काटन र नयाँ रोपण, शहर निर्माण र यति मा। एन, जलवायु परिवर्तन बनाउन। काठ कडा हावा शासन, माटो chilled छ रूपमा, बरफ गिर कसरी निर्धारण जो असर।
शहर मा हरियो बोट सौर विकिरण, चिस्यान वृद्धि को प्रभाव कम, दिउँसो र साँझ मा तापमान फरक कम, हावा को dustiness कम।
मान्छे पहाडलाई तल वन कटौती भने, भविष्यमा यो माटो क्षरण गर्न जान्छ। साथै, रूखहरू संख्या कम वैश्विक तापमान घट्छ। तर, यो मात्र रूखहरू द्वारा अवशोषित छैन जो, तर पनि अतिरिक्त काठ को अपघटन द्वारा विनियोजन हावा, कार्बन डाइअक्साइड को एकाग्रता मा वृद्धि हो। यो सबै विश्वव्यापी तापक्रम मा कमी लागि compensates र यसको वृद्धि गर्न जान्छ।
उद्योग र जलवायु यसको प्रभाव
जलवायु परिवर्तनको कारण समग्र वार्मिंग मा, तर पनि मानिसजातिको गतिविधिमा मात्र होइन ढाँट्छन्। मान्छे कार्बन डाइअक्साइड, नाइट्रोजनवाला ओक्साइड, मिथेन, tropospheric ओजोन, hlorftoruglevody जस्ता पदार्थ को हावा मा एकाग्रता वृद्धि। यो सबै अन्ततः ग्रीनहाउस प्रभाव निम्त्याउँछ र नतिजा अपरिवर्तनीय हुन सक्छ।
दैनिक औद्योगिक बिरुवाहरु हावा मा खतरनाक ग्याँसहरु धेरै फेंकना। सामान्यतः प्रयोग वाहन आफ्नो EXHAUSTS संग वातावरण प्रदूषित बनाउँछ। धेरै कार्बन डाइअक्साइड तेल र कोइला को दहन समयमा गठन। पनि कृषि माहौल गर्न धेरै क्षति पैदा छ। सबै हरितगृह ग्याँस को लगभग 14% यस क्षेत्र उत्सर्जन मा छ। savanna, मल, मल, पशुपालन र यति मा। एन द ग्रीनहाउस प्रभाव को जल यस पाराले जोतेर क्षेत्रहरू, र फोहोर को जलिरहेको, ग्रह को थर्मल सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्छ, तर मानव गतिविधि पटक यो प्रभाव amplifies। र यो प्रकोप निम्त्याउन सक्छ।
म किन जलवायु परिवर्तन को डर हुनुपर्छ?
संसारको climatologists को 97% सबै निकै गत 100 वर्ष भन्दा बढी कायापलट विश्वास गर्छन्। र जलवायु परिवर्तनको मुख्य समस्या - यो मानव गतिविधिहरु छ। तपाईं परिस्थिति कसरी गम्भीर मजबूती छैन बताउन सक्नुहुन्छ, तर त्यहाँ चासो कारणहरू प्रशस्त छन्:
हामी संसारको नक्शा कोर्नुहोस् छ छौँ। तथ्यलाई पनि ग्लेसियर ढल्छ भने अनन्त आर्कटिक र अन्टार्कटिक, वैश्विक जल संसाधन लगभग 2% प्रतिनिधित्व, समुद्र स्तर 150 मीटर द्वारा उठ्नेछ छ। कुनै न कुनै वैज्ञानिकहरु अनुसार आर्कटिक 2050 को गर्मी मा बरफ-मुक्त हुनेछ भविष्यवाणी। धेरै तटीय सहर ग्रस्त, द्वीप अमेरिका को एक नम्बर सम्पूर्ण गायब हुनेछ।
एक वैश्विक खाद्य अभाव को खतरा। पहिले नै संसारको जनसंख्या सात अरब मान्छे छ। अर्को 50 वर्ष मा यो जनसंख्या अर्को दुई अर्ब भन्दा बढी हुनेछ अपेक्षा गरिएको छ। यदि वृद्धि जीवन र कम को यो प्रवृत्ति शिशु मृत्यु दर खाना को 2050 मा 70% हालको तथ्याङ्कले भन्दा बढी आवश्यक हुनेछ। समय द्वारा, धेरै क्षेत्रमा भर गर्न सकिन्छ। तापमान वृद्धि मरुभूमिमा सादा परिवर्तन हुनेछ। बाली खतरा छन्।
कार्बन डाइअक्साइड र मिथेन वैश्विक उत्सर्जन गर्न आर्कटिक र अन्टार्कटिक नेतृत्व पग्लिने। अनन्त बरफ अन्तर्गत हरितगृह ग्याँस को एक ठूलो रकम हो। वातावरण बिच्छेद, तिनीहरूले मानवजातिको लागि विपत्तिजनक परिणाम परिणामस्वरूप, को ग्रीनहाउस प्रभाव पार्छ।
महासागर acidification। सागर मा लगभग कार्बन डाइअक्साइड एक तेस्रो सञ्चय छ, तर ग्यास supersaturation पानी ओक्सीकरण नेतृत्व हुनेछ। औद्योगिक क्रान्ति 30% को ओक्सीकरण मा वृद्धि गर्न नेतृत्व गरेको छ।
प्रजाति को ठूलो विलुप्त। निस्सन्देह, विलुप्त विकास एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो। तर धेरै जनावर हालै लोप र बिरुवाहरु, र यो कारण - मानिसजातिको गतिविधिहरु।
चरम मौसम घटनाहरू। ग्लोबल वार्मिंग प्रकोप निम्त्याउँछ। भोकमरी, बाढी, हुर्रिकानेस, भूकम्प, tsunamis - यो थप र थप तीव्र हुन्छ। अब चरम मौसम अवस्था एक वर्ष 1,06,000 मानिसहरू सम्म मारे, र यो आंकडा मात्र बढ्नेछ।
युद्ध को Inevitability। भोकमरी र बाढी uninhabitable मा सम्पूर्ण क्षेत्रहरु परिवर्तन हुनेछ, र यसैले, मान्छे जीवित मौका खोज्न हुनेछ। स्रोतहरू लागि युद्ध सुरु गर्नुहोस्।
समुद्र धाराहरु परिवर्तन। मुख्य "हीटर" युरोप खाडी स्ट्रीम छ - अटलांटिक महासागर साथ न्यानो वर्तमान बगिरहेको। यो तल खस्दा र यसको दिशा परिवर्तन समयमा पहिले नै। यदि प्रक्रिया जारी, युरोप हिउँ एक तह अन्तर्गत हुनेछ। विश्वभरिका, मौसम संग एक ठूलो समस्या हुनेछ।
जलवायु परिवर्तन पहिले नै अरबौं लागत छ। यो भने सबै जारी हुनेछ कति यो संख्या वृद्धि गर्न सक्छन् ज्ञात छैन।
पृथ्वी ह्याकिङ। कुनै एक ग्लोबल वार्मिंग देखि ग्रह परिवर्तन कति भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुन्छ। वैज्ञानिकहरूले लक्षण रोक्न तरिका विकसित गर्दै छन्। तिनीहरूलाई को एक माहौल मा सल्फर को ठूलो रकम फालिएको छ। यो एक विशाल प्रभाव फुट्ने काम बहाना र कारण सूर्यका blockage गर्न ग्रह को ठंडा नेतृत्व हुनेछ। यो के प्रभाव यस प्रणाली मानवता यो बुरा गर्नेछ कि छैन वास्तवमा छ ज्ञात छैन।
संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन
संसारको सबैभन्दा देशहरूको सरकारको जलवायु परिवर्तन को परिणाम पनि हुन सक्छ के को गम्भीर डराउँछन्। फ्रेमवर्क कन्वेंशन - 20 वर्षभन्दा अघि, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता स्थापित भएको थियो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन मा। यहाँ हामी सबै सम्भव उपाय ग्लोबल वार्मिंग रोक्न विचार गर्नुहोस्। अब कन्वेंशन रूस सहित 186 देशहरुमा, द्वारा मंजूर गरिएको छ। औद्योगिक: सबै सहभागीहरू3समूह मा भिन्नता , विकसित देशहरुमा आर्थिक विकास र विकासशील देशहरुमा संग।
जलवायु परिवर्तन मा संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन माहौल मा हरितगृह ग्याँस वृद्धि र संकेतक को अगाडी स्थिरीकरण को कमी को लागि लड छ। यो हासिल गर्न सकिन्छ त माहौल वा तिनीहरूको उत्सर्जन मा एक कमी देखि हरितगृह ग्याँस प्रवाह वृद्धि गरी। पहिलो embodiment लागि वातावरण देखि कार्बन डाइअक्साइड अवशोषित र जीवाश्म ईंन्धन को खपत कम यदि दोस्रो embodiment हासिल गरिने, युवा जंगल को एक ठूलो संख्या आवश्यक छ। देश द्वारा मंजूर सबै दुनिया वैश्विक जलवायु परिवर्तन हो भनेर सहमत हुनुहुन्छ। संयुक्त राष्ट्र आउनै लागेको हडताल को प्रभाव mitigate गर्न सम्भव सबै गर्न तयार छ।
अधिवेशनको भाग देशहरुमा धेरै, संयुक्त परियोजनाहरु र कार्यक्रम सबैभन्दा प्रभावकारी हुनेछ भन्ने निष्कर्षमा आए। क्षणमा, त्यहाँ 150 भन्दा बढी यस्ता परियोजनाहरू छन्। 40 - आधिकारिक, रूस9यस्तो कार्यक्रम, र informally छ।
जलवायु परिवर्तन मा 1997 अधिवेशनको अन्त मा संक्रमण अर्थव्यवस्था हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्न आफूलाई प्रतिबद्ध छ कि prescribes जो क्योटो प्रोटोकल, हस्ताक्षर गरे। प्रोटोकल 35 देशहरूमा द्वारा मंजूर गरिएको छ।
हाम्रो देश पनि यो प्रोटोकल को कार्यान्वयन मा भाग। रूस मा जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक प्रकोप को संख्या दुगुना छ भन्ने तथ्यलाई गर्न पुगे। हामी boreal वनको क्षेत्रमा अवस्थित छन् कि विचार भने पनि, तिनीहरू सबै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन सामना गर्न सक्दैन। यसलाई सुधार गर्न र वन पारिस्थितिकी बृद्धि गर्न, बाहिर औद्योगिक उद्यम देखि उत्सर्जन कम गर्न ठूलो मात्रा गतिविधिहरु बोक्न आवश्यक छ।
ग्लोबल वार्मिंग को भविष्यवाणी
पछिल्लो शताब्दीमा जलवायु परिवर्तन को सार ग्लोबल वार्मिंग छ। सबैभन्दा खराब थप अविवेकी मानव गतिविधिहरु वरिपरि 11 डिग्री मा पृथ्वी तापमान वृद्धि गर्न सक्छन् अनुमान अनुसार। जलवायु परिवर्तन अपरिवर्तनीय हुनेछ। ग्रह ढिलो परिक्रमा धेरै पशु र बोट प्रजाति मर्नेछन्। विश्व समुद्र स्तर धेरै द्वीप र तटीय क्षेत्रमा अधिकांश जलमग्न गरिने धेरै उठ्नेछ। खाडी स्ट्रिम युरोप मा नयाँ साना बरफ उमेर नेतृत्व गर्नेछ जो आफ्नो पाठ्यक्रम, परिवर्तन हुनेछ। व्यापक प्रकोप, बाढी, Tornadoes, हुर्रिकानेस, भोकमरी, tsunamis र यति मा हुनेछ। एन आर्कटिक र अन्टार्कटिका मा बरफ पग्लिने सुरु हुनेछ।
मानवता को लागि, नतिजा विनाशकारी हुनेछ। मान्छे बलियो प्राकृतिक anomalies को अवस्थामा बच्न आवश्यकता अलग्गै अन्य समस्या धेरै छ। विशेष, हृदय रोग, श्वास रोग, मनोवैज्ञानिक विकारहरु को वृद्धि नम्बर, महामारी सुरु। खाना र पिउने पानी एक तीव्र कमी महसुस हुनेछ।
जलवायु परिवर्तन को नतिजा बच्नको लागि, हामी पहिले वातावरणमा हरितगृह ग्याँस को स्तर कम पर्छ। मानवता नयाँ ऊर्जा स्रोतहरु, एक कम carb र अक्षय हुनुपर्छ जो उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। खनिज ईंन्धन - - ढिलो होस् वा चाँडो, अघि विश्व समुदाय जोडले यो मुद्दा, आजकल प्रयोग स्रोत रूपमा उठ्नेछ गैर-अक्षय। एकदिन वैज्ञानिकहरूले नयाँ, थप कुशल प्रविधिहरू सिर्जना गर्नेछ।
यो वातावरणमा कार्बन डाइअक्साइड को स्तर कम गर्न र यस केवल reforestation क्षेत्रमा मद्दत गर्न आवश्यक पनि छ।
तपाईं धरती मा वैश्विक तापमान स्थिर अधिकतम प्रयासमा लागू गर्न चाहन्छु। तर पनि यदि यो सफल छैन, मानिसजातिको ग्लोबल वार्मिंग को न्यूनतम प्रभाव हासिल गर्न प्रयास गर्नुपर्छ।
ENEA मा मास्को oceanarium: विवरण, काम तालिका र ग्राहक समीक्षा
पुतली पार्क (पर्म) - ठोस जंगल मा एक ट्रपिकल उद्यानलाई
को अन्तरिक्ष यान 'Orion ": विवरण, इतिहास
कसरी, स्थिरता र सल्लाह: घोडा कसरी दोहन गर्न
शीर्ष पेंशन (मास्को): समीक्षा, वर्णन, शीर्षक। पेंशन्स मास्को "सबै समावेशी": समीक्षा
बहुलक माटो बाट रोचक लेख
Bourbon व्हिस्की: पेय र ककटेल व्यञ्जनहरु को कथा
7 वाक्यांश आफ्नो बच्चा को psyche मा एक हानिकारक प्रभाव
सपना पुस्तक। चमकता बालकनी के सपना?
Alphonse Elric र आफ्नो भाइ एडवर्ड: एनिमे वर्ण "Fullmetal Alchemist"
Shilak नङ के हो? कसरी shilak गर्छन्? नङ पालिस